Pakistana: Bilaogin’ny Tabataba · Global Voices teny Malagasy
Pakistana: Bilaogin'ny Tabataba
Voadika ny 01 Desambra 2018 20:09 GMT
Mitondra ity lahatsoratra ity aminareo aho no sady mijalin'ny gripa mahery sy hafanam-batana mihoatra nóho ny tokony ho izy. Eny, miresaka momba ny sery sy tazo aho. Na dia nahazo alàlana hiala sasatra noho ny aretina aza aho avy amin'ny ekipan'ny Toniandahatsoratra GV (Neha, misaotra anao!) ho an'ny lahatsoratro izay tokony havoaka amin'ny Zoma, tsy namela ahy hatory ilay gripa tsy zakako sady halako, ary noho izany, nandia ny araben'ny aterineto nitaingina ilay Scooter Vespa atokisako aho mba hitondrana ity fehin'ny bilaogy Pakistaney ity hovakianareo anaty fahafinaretana.
Bilaogy mifangaro ity manaraka ity, izay hikoako sy hievenako mandritra ny fivoahako anaty aterineto, natolotra anao anatinà filaharana mikorontana. Mifantoka amin'ny horohorontany tao Pakistana ny ankamaroan'ireo lahatsoratra ireo (tsy mahagaga), satria mbola io no resaka tena goavana. Kanefa misy lahatsoratra miresaka zavatra hafa nampidiriko tao (hazavàna kely) mba hitondra hanitra hafa anatin'ny fangaro.
Manontany tena momba ny fierendozan'ny tanànan'i Karachi anaty tranganà horohorontany I theocracy; manoratra ny antsipirian-dresaka iray tena mahaliana nisy teo aminà Mpampianatra sy mpianatra (pejy voafafa) i Falling Down; manazava fijoroana vavolombelona iray goavana be avy ao Muzafarabad i Minigma; mitabataba ambanin'ny lohateny hoe Islamic Jihad (rohy maty) i Opinionated Voice; manontany i FM, “ohatrinona ny vidin'ny bilaoginao?”; manana lahatsoratra fohy nefa mazava i Rambling On momba ny hatsoran'ny vahoaka ao amin'ny tanànan'i Karachi; manoratra momba ny Qawalli tiany indrindra (rohy maty) i Organic Brew; amafisin'i Jammie’s Jar ny hevitr'i Rambling On momba ny vahoakan'i Karachi; mandinika ny zavabitan'ny Governemanta Pakistaney i Glass House; ary farany, manazava ny hatsoran'ny vahoaka ao Pakistana (pejy voafafa) anatin'izao fotoan-tsarotra izao ihany koa i Unaiza.
Koa satria marary toy ny alika aho (izay nitarika ahy harary TEO AMBONIN'ny alika avy eo), tsy afaka nanoratra ho an'ny bilaogiko manokana aho tamin'ity herinandro ity. Tiako anefa ny hanazava lahatsoratra iray nosoratako taloha (anatin'ny rakitra ‘tsara indrindra’ avy amiko) izay mamelabelatra ireo fomba sy antony nanombohako nanoratra bilaogy. Heveriko fa mety hahaliana anareo izany.
Tsara kokoa raha miala amin'izay aho satria roasin'ny rindrambaiko fibahanana viriosy hiala amin'ny tontolon'ny aterineto ny vatako voan'ny gripa. Mandra-pihaona indray…